Gabadh dhalashadeeda u dabaal dagaysa oo loo keenay ubax uu u sii dalbay aabaheed oo dhintay - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka @sellersbailey/Twitter
Dabaaldeggii ay samaysatay Bailey Sellers markii ay 21 jir noqotay ayaa murugo isu badalay markii loo keenay ubaxyo uu horay lacagta u sii bixiyay oo aabaheed uu u sii gaday intii uu noolaa ee uusan Kansar dilin.
Aabahan ayaa sii shubay ubaxyada dhalashada gabadhiisa loo gaynayo muddo shan sano ah, si loogu geeyo marka ay dhalashadeeda u dabaaldagayso, wuxuuna lacagtaas shubay markii ay 16 jirka ahayd.
Sannad kaste waxaa loo keeni jiray ubaxyada oo ay weheliyaan qoraallo shanti sano ee la soo dhaafay, kan ayaana ahaa kii ugu dambeeyay.
Sannadkan Fariinta la socotay waxay ahayd "Wali garabkaaga ayaan ahaan doonaa heer kaste oo aad marayso, hareertaada fiiri agtaada ayaana taaganahay."
Qoraal quluubta taabanaya oo Bailey oo reer Maraykan ah ay soo dhigtay Twitter-ka ayay ku sheegtay wixii uu u qabtay aabaheedii cajiibka ahaa iyadoo ku dartay: "Aabo aad baan kuugu xiisay."
Waxay baraha bulshada soo dhigtay sawirka qoraalkii aabeheed, ubaxyadii uu lacagtooda sii bixiyay intuusan dhimanin ee loo keenay iyo sawir hore oo iyada oo yar ah, qoraalka lagu soo ladhay ee aabaheed wuxuu u dhignaa sidan: "Tani waa waraaqdaydii jacayl ee u dambaysay een kuu soo diro tan iyo inta aan dib uga kulmayno.
"Ma rabo in ay ilmo kaa soo daadato ood murugooto gabadhaydiiyeey meel ka wanaagsan ayaan joogaa".
Dad badan ayaa gabadha u jawaabay waxaana ka mid ahaa @thesn0wmexican oo soo qoray "Ilmo ayaa iga soo daadatay markaan qoraalkaaga arkay, waan ka xumahay geerida aabahaa, arrintan waa mid murogo leh haddana qalbiga dhalaalinaysa maadaama uu sidaas kuu sameeyay".
Bailey ayaa u jawaabtay oo tiri: "Waan ogahay oo sannad walbi waan sugi waayi jiray dabaaldegga dhalashadayda, sababtoo ah waxaan dareemi jiray in uu garabkayga joogo, laakiin waa sannadkii u dambeeyay ee aan hadiyaddiisa heli doono marka taas ayaan ka qalbi jabay."